Ya mere ị na-achọ ụfọdụ usoro nkwado ndabere na mpaghara iPhone kọntaktị, bụrụ na i nwere ike ihichapụ kọntaktị ma ọ bụ ọnwụ ha accidently. Ọ bụghị a akụda ọrụ ọ bụla ọzọ. Ke ibuotikọ emi, m na-aga na-egosi gị 4 ụzọ ndabere kọntaktị na iPhone mfe.
Method 1. 1 Pịa ndabere Kọntaktị na iPhone na MobileTrans Method 2. ndabere kọntaktị site na iPhone na iTunes Method 3. ndabere iPhone Ndi ana-akpo ka iCloud Method 4. ndabere iPhone Ndi ana-akpo Gị Email
Method 1. 1 Pịa ndabere Kọntaktị na iPhone na MobileTrans
Wondershare MobileTrans Ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac bụ ihe dị mfe na-eji iPhone ndabere software, nke na-enyere nkwado ndabere na mpaghara na-azọpụta kọntaktị site na iPhone na otu click. Ọ bụghị nanị na nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị zọpụta o iPhone ebe nchekwa, ma na-ndabere ndị nọ iCloud, Gmail, Yahoo !, Hotmail na ndị ọzọ gị na kọmputa. Mgbe ọ bụla ị chọrọ, ị pụrụ weghachi kọntaktị gị iPhone mfe. Ọzọkwa, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na iOS 9.
Nzọụkwụ 1. Download na-agba ọsọ Wondershare MobileTrans Win ma ọ bụ Mac version na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone ka PC ma ọ bụ Mac site na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Na isi window, pịa Back Up ekwentị gị ịbanye ndabere window.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ghọtara, gị iPhone ga-emere na ekpe. Gaa n'etiti window.
Site ndabara, niile data na ike ga-kwadoo na-ticked. Dị nnọọ wepụ akara tupu ndị ọzọ data ma e wezụga ana-akpo.
Nzọụkwụ 5. Pịa Malite Copy na-amalite ndabere. N'oge ndabere usoro, na-gị iPhone ejikọrọ.
Nzọụkwụ 6. Mgbe iPhone kọntaktị ndabere na-okokụre, pịa OK. Mgbe ahụ, kọntaktị gị na-azọpụta na gị iPhone. Ị nwere ike iweghachi gị iPhone mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Method 2. ndabere kọntaktị site na iPhone na iTunes
iTunes na-ahapụ gị ndabere iPhone kọntaktị na kọmputa kwa. Ọ bụ free na ị pụrụ ime ya onwe gị. Otú ọ dị, ị ga-ndabere ọzọ data mgbe akwado iPhone kọntaktị. Ndị ọzọ okwu, iTunes ndabere fọrọ nke nta niile data na oge, ma ọ dịghị ekwe ka ị selectively ndabere kọntaktị. N'okpuru ebe bụ zuru ndu na-esi ndabere iPhone kọntaktị. Ka-eje ije site na ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na-eji eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. iTunes ga ngwa ngwa-achọpụta rụọ gị iPhone na mgbe ahụ na-egosi ya na ya na-ekpe sidebar.
Nzọụkwụ 3. N'okpuru NGWAỌRỤ, pịa gị iPhone. Site n'ime nke a, gị iPhone akara panel a ga-emere na nri.
Nzọụkwụ 4. Pịa Summary. Pịgharịa gaa na ala na windo ruo mgbe ahụ backups ngalaba. Tinye akà rà kọmputa a na pịa Back Up Ugbu a.
Nzọụkwụ 5. The ndabere usoro amalite. Ọ ga-ewe gị oge ụfọdụ. Nnọọ echere ruo mgbe usoro na dechara. Mgbe ahụ, gị iPhone ndabere faịlụ a ga-na kọmputa gị, na kọntaktị gị na-echekwa faịlụ. Chọta gị iPhone ndabere ọnọdụ >>
Method 3. ndabere iPhone kọntaktị na iCloud
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndabere kọntaktị na iPhone ka ígwé ojii, iCloud bụ ezi nhọrọ. iCloud awade gị ohere ka kọntaktị site na weebụ conveniently. Ugbu a, na-eso mfe nzọụkwụ ịmụta otú iji mee ya.
Nzọụkwụ 1. On gị iPhone, mgbata Ntọala. On Isetịpụ ihuenyo, pịgharịa gaa na ala iji chọta iCloud na enweta ya.
Nzọụkwụ 2. Wet ke gị iCloud akaụntụ. Jide n'aka gị WiFi netwọk agbanwuru.
Nzọụkwụ 3. On iCloud ihuenyo, gbanye Ndi ana-akpo nhọrọ, na enweta jikota.
Nzọụkwụ 4. Find Nchekwa & ndabere nhọrọ na enweta ya.
Nzọụkwụ 5. Gbanwuo iCloud ndabere na enweta Back Up Ugbu a.
Nzọụkwụ 6. Chere ruo mgbe nkwado ndabere na mpaghara usoro na dechara.
Method 4. ndabere iPhone Ndi ana-akpo Gị Email
E wezụga iCloud, Apple na-enye gị ike ndabere kọntaktị na ụfọdụ adreesị ozi-e, dị ka Gmail, Yahoo !, Hotmail, Exchange, na ndị ọzọ. The nkuzi nkwado ndabere na mpaghara iPhone kọntaktị na Email bụ fọrọ nke nta ahụ. N'ihi ya, m nnọọ na-akwado iPhone kọntaktị na Exchange dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Gaa Ntọala na gị iPhone. Chọta Mail, Ndi ana-akpo, kalenda.
Nzọụkwụ 2. Pịa Add Akaụntụ .... Mgbe ahụ, ị ga-ahụ ọtụtụ adreesị ozi-e dị. Enweta Exchange.
Nzọụkwụ 3. Dejupụta ihe ọmụma banyere aha gị, email na akaụntụ, okwuntughe na nkọwa.
Nzọụkwụ 4. Kpatụ Next. Jide n'aka na kọntaktị na akara ngosi agbanwuru. Mgbe ahụ, pịa Save ịzọpụta gị iPhone kọntaktị na Exchange.
2 Ụzọ Weghachi iPhone
10 Ọtụtụ-jụrụ Probs banyere iPhone Update
2 Ụzọ imelite iPhone Mfe
Nchọpụta nsogbu banyere Iweghachi iPhone
1 Pịa Nyefee iPhone ka Android
1 Pịa Nyefee Android ka iPhone
Detuo ngwa site iPhone ka iTunes
Otú nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Computer na site na kọmputa na-iPhone
Wondershare IPhone Nyefee: na Best iPhone nnyemaaka
> Resource> iPhone> 4 Ụzọ ndabere iPhone Ndi ana-akpo na / enweghị iTunes